Uyazi yini ukuthi ukusebenza, Sberbank eRussia
Yiqiniso, i-Savings Bank of Russia ayidingi ukukhangisa, ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi uyilungiselelo okuqinile zezimali. Leli qiniso liqinisekisa inethiwekhi okubanzi Amahhovisi ezweni lonke kanye nenombolo unimaginably omkhulu amakhasimende.
Savings Bank - omunye ethandwa kakhulu credit izikhungo baseRussia
Kuphela enhloko-dolobha, kukhona angaphezulu kwezigidi eziyisishiyagalombili Izitolo okudayisa kanye service. Daily emnyango kwezinhlangano elingenhla ahlanganisa amakhulu abaseRussia, ngenkathi hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi ukusebenza Sberbank. Ulwazi olungezansi kuzokusiza uqonde le nkinga.
Yiqiniso, umbuzo ukuthi Savings Bank, akuyona inkinga uma ukufinyelela i-Inthanethi. Nokho, akuwona wonke umuntu ithuba ukusebenzisa "World Wide Web." Futhi ngokuvamile kukhona isidingo wenza transaction kwezezimali, akwaziwa ukuthi Savings Bank.
Yiqiniso, kubhekwe sikhungo abolekise ukhonza amakhasimende ayo ngezinsuku zeviki futhi ngoMgqibelo, ngeSonto kuba nezisebenzi zayo ngezimpelasonto.
Njengomthetho, ngosuku ukusebenza iqala lapho kugamanxa lesishiyagalolunye ekuseni futhi iphela lapho kugamanxa ihora kusihlwa. Le modi ekhethiwe, ngokukhethekile, ezinye legatsha inhlokodolobha Sberbank. Kulokhu, kwekhefu lasemini kuyadingeka ukuze kwesikhathi kusuka 14 kuya 15 pm wesikhathi eMoscow. Nakhu ukuthi kusebenza kanjani Sberbank "throned".
On the eve of namaholide Service Centres okukhulunywe ngawo ngaphambili emsebenzini isikhungo sezezimali ngeSabatha noma isheduli abasebenzi "hamba ekhaya" namahora nengxenye ngaphambili.
Njengoba nowezigaba main nokubika ebhange isiRashiya, kufanele kuphawulwe ukuthi abasebenzi bakhe bafeze imisebenzi yabo futhi "kwasemini isikhathi" ngenkathi they fanele a wezinsuku eziyisithupha ngesonto ukusebenza. Kufanele kuqashelwe ukuthi inhloko Sberbank ngoMgqibelo ukuvula kuze lesithupha ntambama.
amayunithi okunjalo enhloko-dolobha Russian bachazwa ngempela kalula - bonke babe ikhodi ngamunye enamadijithi amane, kuyilapho ehhovisi emuva eyabelwe inombolo enamadijithi.
izici ezikhethekile ezengeziwe Amahhovisi Sberbank umsebenzi
Noma yimuphi gumbi olucutshungulwayo has ezengeziwe zezimali inhlangano endlunkulu ukuthi usebenza mode ngamunye. Ivame ukubizwa ngokuthi "Umsebenzi". Kulapha iklayenti ongeza uma kuye kwadingeka isidingo esiphuthumayo yenze isenzo zokukhokhelwa ngezimali. Ngisho noma namuhla ngempelasonto noma ngeholide, kuphoqelekile wakhonza.
Cabanga ukusebenza kwamahhovisi egatsha eziningana ezengeziwe Savings Bank emahhovisi esifunda elise-dolobha.
Ngokwesibonelo, igatsha Tver, esisogwini Leningradsky Prospekt, ngempelasonto ukusebenza kwesigamu lesishiyagalolunye ekuseni kuze lesithupha ntambama, ngesikhathi esifanayo enikeziwe kwekhefu lasemini kusukela 14 kuya ku-15 pm wesikhathi eMoscow.
Kodwa kwehhovisi ezengeziwe, ngokwendawo esisogwini Kutuzov Avenue ku enxanxatheleni yezitolo "Four Seasons", has a imodi ezahlukene wokusebenza.
Kuphinde kuvule ngineminyaka eyishumi ekuseni ivale ngeleshumi nqo. Ngakho okungenhla endlini iyunithi usebenza ngaphandle Savings okukhiphayo.
Njengoba for ehhovisi, ise-Ural emgwaqweni, isibonelo, kufanele kuphawulwe ukuthi ukusebenza kwawo alihlukile: lapha amakhasimende asizwa inxenye lesishiyagalolunye ekuseni kuze lesithupha ntambama. Futhi uma ngokungazelelwe umuntu ngeSonto wabuza: "Ingabe namuhla Sberbank ngaphandle Ural", impendulo bekuyoba: "Yebo, iyasebenza, kodwa kuphela kuze kube amahora 14."
It inikeza amakhasimende futhi ATM
Ngaphezu ongumsizi neminyango, Sberbank ibahlomisé konke ATM yayo ukumelwa. Njengomthetho, zingabantu iseduze lamanye Amahhovisi endaweni yezitolo nokuzijabulisa izikhungo, ngendlu eceleni izindawo kwengqalasizinda. Cishe bonke ukusebenza ubusuku nemini. Luhlelo ATM ngaphakathi ezakhiweni zamabhizinisi, efana esimisweni izinkampani waziklebhula amakamelo.
Izici esimisweni Amahhovisi ukukhonza izinhlangano
Yegatsha Savings Bank of Russia, onguchwepheshe ukusebenza izinhlangano ezingokomthetho, ukusungula ikhefu phakathi 14 no-15 amahora isikhathi eMoscow. Ezinye zazo ukusebenza izinsuku ezinhlanu ngesonto futhi inikeza e yakhe umsebenzi amahora encishisiwe. Njengoba ojwayelekile, abasebenzi ehhovisi lika Savings Bank of Russia ukusebenza kuphela kumakhasimende ezinkampani, ngosuku lwesabatha "hamba ekhaya 'amahora 14 ngosuku.
Uma ikhasimende Ngemva kwesikhathi somsebenzi ngoMgqibelo, kwavela ngokuzuma isidingo sokucela usizo, khona-ke ungathola kuyo iyunithi eceleni.
Inkokhelo terminals yemali
Akunakwenzeka ukuba ubheke imodi terminals lokukhokha kanye cash irejista. Okokuqala, njengoba umthetho, ayatholakala nje Phiko ngokuhamba kwesikhathi. Uma iklayenti kufanele zisebenze "iwindi" ibhokisi ehhovisi, kungcono ukukwenza ngaphambili, hhayi ngekota yehora ngaphambi kokuphela umsebenzi iyunithi. Kungenjalo, ungase nje awunaso isikhathi!
Abaholi Sberbank eRussia liye lenza umzamo omkhulu ukuze uthuthukise izinga lezinhlelo kumakhasimende, ngakho babengafuni lutho ukhululekile kakhulu izidingo in the izikhungo ngenhla zezimali kanye credit. Lokhu kuqinisekisa hhayi kuphela inombolo esikhulu terminals lokukhokha kanye ATM, kodwa futhi inthanethi uhlelo yasebhange evumela, ngaphandle kokushiya ekhaya, enze imali zokukhokhelwa.
Proposed Bank "Alfa-Bank" imali - lena ezingeni eliphezulu ngokuthembeka nemibandela ezithakazelisayo!
"Promsvyazbank": ukudluliselwa kusuka ekhadini kuya ekhadini. Imithetho, izici, ikhomishini
Ukuqoqwa kwemali. Yini ehlanganisiwe kule yasebhange - incazelo egcwele
Gold bullion - balondoloze imali ngokuhlakanipha!
Ishadi lama-akhawunti ebhange. Izigaba eziyinhloko nezici
Kungakanani ukuthini synthesizer nokuthi ukukhetha ke?
Inothi kamama: ukulungiswa "Ambrobene 'ngoba umntwana - lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo ngempumelelo ukhwehlela
Udweba kanjani indawo enhle?
Ukususwa kwe-Aloe - izakhiwo nesicelo
Nail Design "ulwandle": ongakhetha ethandwa, izixazululo ehlukile
Lapho Vitamin B 12 kuyingozi, futhi uma kudingeka
Ihambisana Zodiac Signs zobungane: isici izakhi
A umugqa omfushane ukuphila uhlangothi, izinhlamvu nencazelo. ukubhula ngokufunda intende
Ngazi kanjani ukuthi uthanda guys, kunyakata kwemtimba kanye amehlo?
Fall esekuphakameni - ethi incwadi iphupho? Ukuphakama ngebhudango kusho?